I always go to this blogs
Zawgyi ဖောင့်တ် Download
Technorati Profile *Download ဖောင့်တ် *Download လက်ကွက် *Download Keyboard Installer
Goody Blog Links
Click Here ဒီဟာကဘရောက်ဇာတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးMozilla Firefox ဘရောက်ဇာပါ။ ဒီဘရောက်ဇာကိုလူတော်တော်များများသိကြပါတယ်။
စီစဉ်တင်ဆက်သူ Goody ရေးသားချိန် 6:29 PM0ယောက်ဒီလိုပြောပါတယ်
ကိုးကားရည်ညွန်းချက် Mozilla Firefox Download
ဒီအကောင်တွေက အေးခဲနေတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာနေပြီးတော့ သာမန်အားဖြင့်ပေါင်၁၅၀ကနေ၂၀၀ကြားရှိတယ်။ ဦးခေါင်းမှာချိုနှစ်ချောင်းလည်းပါတယ်။ သူတို့ ကအသီးအရွက်အဓိကထားပြီးစားတယ်။ သူတို့ ကအမွေးကအညိုရောင်ရှိပြီးနုညံ့တယ်။ အမွေးကထူတော့အပူဒဏ်ခံနိုင်အောင်လို့ ဆိုပြီးအောက်ကရွံ့တွေခင်းပေးထားတယ်။ ဟိုတစ်လောကတောင်အဲဒီကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ချိုနဲ့ ခွေ့လိုက်သေးတယ်။ ဒဏ်ရာရသွားတာတော်တော်ပြင်းတယ်။ မေမြို့ရောက်ရင်အဲဒီအကောင်တွေကိုသွားကြည့်လိုက်ဒာုံးနော်။ အခြားအကောင်တွေလည်းရွိပေမဲ့အချိန်မရလို့ ဓာတ်ပုံမရိုက်ခဲ့ရဘူး။ ငန်းနက်လေးတွေကိုရိုက်ခဲ့ပေမဲ့ဓာတ်ပုံဆိုက်ဒ်ကကြီးနေလို့ ချဲု့ပြီးမှပဲတင်ပါတော့မယ်။ Googleမှာရှာချင်ရင်တော့Takinကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
စီစဉ်တင်ဆက်သူ Goody ရေးသားချိန် 6:24 PM0ယောက်ဒီလိုပြောပါတယ်
English Grammer အကြောင်းသိကောင်းစရာ (အမှတ်စဉ်1)
NumberရှေမှာA နှင့်The မှားသုံးမိခြင်း-အရေအတွက်
x A number of thieves are increasing
@The number of thieves is in creasing.
မှတ်ရန်။ ။The number of ဆိုတာ ကိန်းဂနန်းတစ်ခုကို ရည်ညွန်းကြောင့် singular verb(တြိယာ
ပုံစံ။ ။The number of + singular verb
xA number of cars was parked outside the school
@A number of cars were parked outside the school
မှတ်ရန် ။ ။ A number of သည် အရေအတွက်များစွာသော ဟုဆိုလိုတာဖြစ်တာကြောင့် Plural
စီစဉ်တင်ဆက်သူ Goody ရေးသားချိန် 4:37 AM0ယောက်ဒီလိုပြောပါတယ်
Space အစားThe spaceမှားသုံးမိခြင်း-အာကာသ
xThere are millions and millions of stars in the space.
@There are millions and millions of stars in space.
မှတ်ရန်။ ။အာကာသကိုရည်ညွန်းလိုလျင် "space"ရှေ့ မှာ "the"ခံရန်မလိုပါ။
"The space"လို့ ဆိုလျင် လစ်လပ်နေသောနေရာ(သို့ )ဟာကွက်ကို ဆိုလိုတာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
2 Obey နောက်မှto မှားသုံးမိခြင်း=စကားနာခံသည်
x-He wasavery good boy and obeyed to his parents.
@He wasavery good boy and obeyed his parents.
မှတ်ရန်။ ။ "Obey"(စကားနာခံသည်)ဟူသောVerb(တြိယာ)နောက်မှာ "to"မပါဘဲObjectတိုက်ရိုက်လိုက်ရမယ်။
စီစဉ်တင်ဆက်သူ Goody ရေးသားချိန် 4:35 AM0ယောက်ဒီလိုပြောပါတယ်
ဒီနေ့ တစ်နေကုန်စဉ်းစားနေတာဘာပို့ စ်
1 never နှင့်to ကိုခွဲခြားသုံးမိခြင်း=မည်သည့်အခါမျ
x I asked him to never arrive late
@I asked him never to arrive late.
မှတ်ရန်။ ။"Not"(သို့ )"Never "ကို toဖြင့်ခွဲမထားဘဲ အမြဲတွဲသုံးရပါမယ်
eg- You are not to go any where.
စီစဉ်တင်ဆက်သူ Goody ရေးသားချိန် 7:57 AM0ယောက်ဒီလိုပြောပါတယ်
Flock ဘယောက်စ်စာ Download
ဒီဟာကFlockဆိုတဲ့Browserတစ်ခုပါ။ကောင်းပါတယ်။စမ်းသုံးကြည့်ကြပါ။ ကြိုက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲဒီအပြင်ကိုယ်ကကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဟာတစ် ခုခုကိုကိုယ့်ဘလော့မှာတင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီFlockကနေပို့ လို့ ရပါ တယ်။ ပို့ နည်း။ ။့right Click နှိပ်ပြီးအောက်ဆုံးမှာBlog Thisဆိုတာကို နှိပ်ရုံပါပဲ။
စီစဉ်တင်ဆက်သူ Goody ရေးသားချိန် 4:49 AM0ယောက်ဒီလိုပြောပါတယ်
ကိုးကားရည်ညွန်းချက် Flock Browser Download
ဒီဟာလေးကoovooဆိုတဲ့Free Video Chat ပါ။စမ်းသုံးကြည့်ကြပါအုံး။
စီစဉ်တင်ဆက်သူ Goody ရေးသားချိန် 4:13 AM0ယောက်ဒီလိုပြောပါတယ်
ကိုးကားရည်ညွန်းချက် Oovoo Chat Download
ပုံတွေကမလှပေမဲ့ကြည့်ရှုပေးပါရန်တောင်းဆိုပါသည်။တစ်ယောက်တည်းပျင်းတာနဲ့ လျှောက်လုပ်ရင်း နဲ့ ဂွတ်ဒီးရဲ့ လှပတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုဝေဖန်ပေးကြပါအုံး။
စီစဉ်တင်ဆက်သူ Goody ရေးသားချိန် 4:22 AM0ယောက်ဒီလိုပြောပါတယ်
Mandalayမြို့ ရဲ့ မိုးရွာတဲ့နေ့ တစ်နေ့ 
မိုးအရမ်းရွာတဲ့ဟိုနေ့ ကစာအုပ်ဖတ်ရင်းpostတစ်ခုတင်ချင်တယ်လို့ စဉ်းစားနေတုန်းမှာဘဲမိုးရွာလာတယ်။ ဒါနဲ့ အတော်ပဲဆိုဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တာ။ရိုက်ထားတာလေးရက်လောက်ရှိနေပြီ။မတင်ဖြစ်တာနဲ့ ဒီနေ့ မှတင်လိုက်တာ။ အဲဒီနေ့ က့ မိုးကတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရွာတာ။
စီစဉ်တင်ဆက်သူ Goody ရေးသားချိန် 3:39 AM0ယောက်ဒီလိုပြောပါတယ်
ကိုးကားရည်ညွန်းချက် မိုးရွာတဲ့နေ့ တစ်နေ့ 
သြဂုတ်လ31နေ့ Blog Day ဖြစ်ပြီး MICT Park မှာBlog Day ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။
စီစဉ်တင်ဆက်သူ Goody ရေးသားချိန် 8:09 PM0ယောက်ဒီလိုပြောပါတယ်
mittsmitt@gmail.com&Goody Lay Blog မှအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်